Life Style Archives - Page5of 10 - Amawpyay
ဒီရုပ်သံလေးကိုကြည့်ပြီး အဝေးရောက်သားအတွက် မျက်ရည်မခိုင်ဖြစ်ရပါလား
ဒီရုပ်သံလေးကိုကြည့်ပြီး အဝေးရောက်သားအတွက် မျက်ရည်မခိုင်ဖြစ်ရပါလား အဖေချီတာမကြိုက်လို့ မင်းငိုတဲ့အခါ…. ဒီအဖေလက်ကြမ်းကြီးတွေ မကြိုက်လို့ မင်းဖယ်ထုတ်တဲ့အခါ…. အဖေ့ချွေးတွေ နံစော်လွန်းလို့ မင်းငြူစူတဲ့အခါ…. ဒီအဖေဆူလို့ မင်းငိုတဲ့အခါ…. ဒီအဖေရိုက်တာမကြိုက်လို့ မင်းငိုတဲ့အခါ…. ကိုယ်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်နိုင်ပြီထင်လို့ မင်းထွက်ခွာသွားတဲ့အခါ…. မင်းအိပ်နေချိန်တိုင်း ခိုးနမ်းနေကြ အဖေ့ကိုသတိရပါ….. မင်းအမေဆူရင် ငေါက်တတ်တဲ့ အဖေ့ကိုသတိရပါ…. မင်းမသိပေမယ့် မင်းအတွက်ဆို အသက်ပါပေးမယ့် အဖေ့ကို ခဏလောက်ဖြစ်ဖြစ် သတိရပါ…..။ ဖေဖေ့ကိုလည်း ချစ်ကြပါ ဝမ်းနဲ့မလွယ်ခဲ့ရပေမယ့် ဝမ်းရေးအတွက် နေပူကျဲကျဲမှာ ရုန်းကန်ခဲ့ရသူပါ … နို့ချိုမတိုက်ခဲ့ရပေမယ့် ထမင်းစေ့လေးတွေ ဖန်တီးပေးခဲ့သူပါ … မေမေ့ပါးကို နမ်းတဲ့အချိန် ဖေဖေ့ပါးကြမ်းကြမ်းမှာ အနမ်းဝေးနေဆဲပါ … မေမေ့လို ပုံပြင်မပြောပြပေမယ့် ဘဝပုံပြင်တွေကို လက်တွေ့ချပြသူပါ … …
ဖူးစာပါ မပါ သိနိုင်တဲ့ အချက် (၈) ခု အသက် ၂၅ ကျော်လာတဲ့အခါ ဘယ်တော့ စားရမှာလဲ ဆိုတာမျိုး သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေတွေဆီက အမေးခံဖူးကြမှာပါ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အချိန်အကြာကြီး တွဲတာကြပြီးပြီ ဆိုရင်တောင် ဖူးစာ မပါတဲ့အခါ၊ အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါ ကွဲကွာ သွားတက်ကြပါတယ်။ သက် ဆိုင် သူ ကိုယ် ဆီ ရှိ ထား ကြ ပေ မယ့် လည်း ဒီ အ ချက် (၈) ချက် ရှိ နေ မယ် ဆို ရင် သင် တို့ ဖူး စာ …
နဖူးကို ကြင်ကြင်နာနာ နမ်းခြင်းရဲ့ အဓိပ္ပာယ် ( zawgyi and unicode ) ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။ ချစ်သူရဲ့ နဖူးလေးကို ကြင်ကြင်နာနာ နမ်းဖူးတဲ့ သူတွေ ရှိသလို အနမ်းခံရဖူးတဲ့ သူတွေလည်း ရှိမှာပါနော်။ အများအားဖြင့်တော့ အမျိုးသားတွေက အမျိုးသမီးတွေကို နမ်းလေ့ရှိတဲ့ အနမ်းလေးပါ။ ပါးနဲ့ နှုတ်ခမ်းကိုမဟုတ်ဘဲ နဖူးလေးကို နူးနူး ညံ့ညံ့လေး သူအနမ်း ချွေလိုက်တဲ့အခါ ရင်ထဲမှာ နွေးထွေး ကြည်နူးရတဲ့ အခိုက်တန့်လေး ချစ်သူတိုင်းမှာ ရှိကြမှာပါ။ ကိုယ့်ချစ်သူ ကိုယ့်ကို ဘယ်အချိန်မှာ နဖူးကို နမ်းတယ်လို့ သင် သတိထားမိလဲ။ ဘာလို့ နမ်းတယ်လို့ ထင်သလဲ။ ၁။ သင်တစ်ခုခုကို …
အက်နေတဲ့ အိုး ရေ ထမ်းရောင်းသူ တစ်ဦးဟာ ရေကန်က ရေကို အိုးကြီး နှစ်လုံး နဲ့ ခပ် ပြီး စလွယ် သိုင်းကာ သူတို့ နေထိုင်ရာ ရပ်ကွက် ထဲမှာ လှည့် လည် ရောင်းချ ပါ တယ် ။ အိုးနှစ်လုံး ထဲကတစ်လုံး မှာ က အတော် အတန် ကြီးတဲ့ အက်ကြောင်း တစ်ခု ရှိ နေ တာ မို့ ရေ ဖြည့် ပေး ရတဲ့ နေရာကို ရောက် တဲ့ အခါ ရေအပြည့် မပါဘဲ အမြဲတမ်း တစ်ဝက်ပဲ ပါ …